AmaRiphabhlikhi aseManhattan akhusela ukumema amakhwenkwe anebhongo kuMnyhadala wabo - Usnews
Indlu Amaqoqo Amahle
AmaRiphabhlikhi aseManhattan akhusela isimemo sawo kwiQela elinoBundlobongela
Ithunyelwe ngo-Okthobha 15, 2018, 1:28 am Shay Horse
Iinkokeli zeklabhu yezopolitiko yaseManhattan eyayisakuba yi-archetype yeRiphabhlikhi ephakathi zithi zimi ngasemva kwesigqibo sokumema umseki weqela lamadoda asekunene njengoko amapolisa ephanda ubundlobongela ngokuchasene neqela lakhe emva kwentetho yakhe kwindlu yabo yeklabhu ngoLwesihlanu ebusuku.
IKlabhu yeRiphabhlikhi yeMetropolitan ipapashe iProud Boys umseki uGavin McInnes ngenkangeleko njengethuba lokubona uMcInnes ephinda ebonisa ukubulawa kwekrele kwesamurai kwenkokeli yaseJapan u-Inejiro Asanuma. Kwiposti ye-Facebook, iklabhu yabiza iProud Boys umseki ongu-Godfather we-Hipster Movement [oye] wathatha kwaye wabhenca i-Deep State Socialists kwaye wamela i-Western Values.
Ukulandela intetho kaMcInnes, iqela lamadoda amalunga nama-30 abonakala esanda kushiya eso siganeko abanjwe kwividiyo ehlasela abaqhankqalazi ababini okanye abathathu kufuphi neklabhu, ngelixa bekhwaza izisongelo kunye neengqungquthela.
Nangona kugxekwa ngaphakathi kwamanye amalungu eklabhu - kunye nevidiyo efota ubundlobongela - iinkokeli zeklabhu zisikhusele isigqibo sazo kwingxelo ngeCawa.
Simema izithethi kwiKlabhu enezimvo ezahlukeneyo zezopolitiko - ezinye sivumelana nazo kwaye ezinye esingavumelani nazo. Kodwa singabaxhasi abanyanisekileyo be-1st Amendment, amagosa eklabhu atsho kwingxelo ngeCawa ebusuku. Sifuna ukukhuthaza iingxoxo zoluntu, kodwa singaze sixhase ubundlobongela. Intetho kaGavin ngolwesiHlanu ebusuku, ngelixa ngamanye amaxesha ibingachanekanga kwezopolitiko kwaye inoburharha, ngokuqinisekileyo ibingakhuthazi ubundlobongela.
Ukuhonjiswa kwetafile ekwindla
Umongameli weklabhu, uDeborah Coughlin, akazange aphendule kwizicelo zodliwano-ndlebe eziphindaphindiweyo.
Ukhuphelo lwesoftware yasekhaya yoyilo yasimahla
Iminyhadala yangoLwesihlanu ibonelela ngesantya esiphazamisayo sotshintsho ngaphakathi kweqela laseRiphabhlikhi kwiminyaka kaTrump, njengoko amaqela akhohlakeleyo athatha amaziko ezopolitiko aseRiphabhlikhi kunye naseMelika ngoqhwithela. Amakhwenkwe anebhongo, awavela kwindibano yocalucalulo eCharlottesville ngo-2017, liqela elalitshatele kubundlobongela kangangokuba amasiko abo okuqalisa abandakanya ukubethwa ngamalungu - isikhalo esikude kwisityebi sase-Upper East Side Republicanism yamanani afana nowayesakuba nguSenator uJacob. UJavits, oqhayisa ngeklabhu yakhe wayenza idolophu yakhe ikomkhulu lephulo.
Yiklabhu ye-Upper East Side genteel-kwaye ukuba namanqindi ngaphandle, ayihambelani, utshilo owayesakuba ngumongameli weQela le-Metropolitan Republican, othethe ne-MC chatel ngemeko yokungaziwa. Owayesakuba ngumongameli wathi utshintsho lweklabhu ukusukela ngo-2016 lulandele inguqu yelizwe apho ithoni yeqela laseRiphabhlikhi iye yaqina, kwaye ithoni yezopolitiko zaseMelika ngokubanzi nazo ziye zaqina.
Ndicinga ukuba amalungu eKlabhu yeRiphabhlikhi yaseMetropolitan aqala ukukholelwa ukuba akanakuphinda aphumelele iiofisi, kwaye athi fuck it, owayesakuba ngumongameli wathi, esongeza ukuba iqela litshintshile emva kokuba kucacile malunga neshumi leminyaka eyadlulayo ukuba abantu baseRiphabhlikhi abasakwazi. nokuba uwine i-ofisi karhulumente kwi Upper East Side Manhattan kaThixo: Kwiminyaka ukususela amagosa anyuliweyo kukho isihendo ebhadula ingxabano ukufumana ubulungu kunye nokonwabisa, kwaye backfired apha.
Uninzi lwamalungu eklabhu yakudala abekho, abantu bakudala baseNew York, banobunzima kakhulu kolu khetho lwezithethi. Lo myalezo uhanjiswe, kakhulu, batsho, besongeza ukuba ubunkokeli obukhoyo bunombono onzima wokuba iindwendwe zabo zimele ntoni.
Babengazi nokuba ngoobani [Abafana Bebhongo]. Ivakala ngathi Imigulukudu yaseNew York , watsho owayesakuba ngumongameli.
U-Alan Bialeck, olilungu lebhodi yangoku yeklabhu, uxelele iMC chatel ukuba buqu akami ngeentetho ezininzi ezisetyenziswa nguMcInnes kunye nabalandeli bakhe. Kodwa wasikhusela isigqibo seklabhu sokubamba umseki weProud Boys, kwaye wathi ukholelwa ukuba uMcInnes wayeqhula kwaye esebenzisa intetho yakhe yasimahla.
IKlabhu yeRiphabhlikhi yeMetropolitan, wongeze, ayiloqela lentiyo.
Sinabantu abathandanayo, sinabantu abamnyama ... sinalo lonke uhlobo lomntu onokuthi ucingelwe kwiqela, utshilo uBialeck. Iklabhu ayiloqela lentiyo.
Ecacisa ukuba akathetheleli iklabhu, uBialeck uphinde wabagxeka kabukhali abaqhankqalazi benkululeko ababonakalise ngaphandle komsitho kaMcInnes, nababonakala ngathi babandakanyeka kwingxabano emva koko.
hudson Valley iihotele zodidi
Xa ujonga ngaphaya kwesitrato kwaye ubona abaqhankqalazi, bebengalunganga, utshilo uBialeck. Babekude kakhulu ngenye indlela. Kutheni ungabahoyi nje?
Amagosa amaninzi anyuliweyo aseNew York - onke amaDemokhrasi - abonakalisa ukucaphuka ngenxa yobundlobongela, kwaye abiza i-NYPD ukuba ithathe amanyathelo malunga ne-Proud Boys, eye yanyulwa njengeqela elizondayo yiZiko loMthetho weNtlupheko yaseMzantsi. I-NYPD ithe ngeCawa ukuba amapolisa aphanda ividiyo yohlaselo ngaphandle kweKlabhu yeRiphabhlikhi yaseMetropolitan. Abakhange baphendule kwizicelo eziphindaphindiweyo zokuba bahlomle malunga nokuba kutheni kungabanjwanga mntu ngamapolisa abekhona ngethuba bebethwa.
Ngentsasa yangeCawe, uRhuluneli waseNew York u-Andrew Cuomo uye walugxeka udushe efowuneni neentatheli, kwaye wabiza i-Republican Party yelizwe ngokuthe ngqo ngokuzimanya neqela likaMcInnes.
Kukho isiganeko esiphazamisa kakhulu eNew York kwimpelaveki, utshilo uCuomo, ebiza iKlabhu yeRiphabhlikhi yeMetropolitan likhaya lomsebenzi weqela leRiphabhlikhi kunye nekhaya lamaphulo eRiphabhlikhi kwilizwe liphela.
Kutheni le nto iQela leRiphabhlikhi, kwiklabhu yabo ephambili, limema amakhwenkwe aneqhayiya, awaziwa ngokuba liqela lentiyo, elaziwa ngokukhuthaza ubundlobongela? UCuomo wabuza, ngobuchule. Kutheni benokubamema ukuba baye kwindibano kwiintsuku nje ezingama-20 ngaphambi konyulo lwaphakathi ekota?
Emva koko waphendukela kuMongameli uDonald Trump, kwaye wathi ukholelwa ukuba, phantsi kobunkokeli bakhe, i-GOP ikhuthaza abantu ngoloyiko kunye nokukhuthaza abantu ngenzondo.
Eyona nto iphambili kukuba ndibambe umongameli enoxanduva, utshilo uCuomo. Ngokucacileyo eli yayiliqhinga lezopolitiko.
amagama ezityalo angaphakathi kunye nemifanekiso
UCuomo ke wabhengeza ukuba ubiza i-FBI ukuba iphande ingxabano yangoLwesihlanu, kuba, kwakhona, eli liqela lesizwe-iCharlottesville, kwilizwe liphela.
eyona ndawo inomdla ukutyelela
Ukuphendula amagqabantshintshi kaCuomo, uSihlalo weGOP yaseNew York u-Ed Cox wabiza irhuluneli njengegwala lezopolitiko kwaye wayityhola ngokutyeshela izenzo zangaphambili zokonakalisa isakhiwo seklabhu phambi kwentetho kaMcInnes.
Inkokeli yokwenyani ibiza ukuzola. Uza kusebenza ne-NYPD ukukhusela iklabhu eneminyaka ephantse ibe yinkulungwane kuhlaselo olongezelelweyo, kodwa ayinguye u-Andrew Cuomo, utshilo uCox kwingxelo. Uzibandakanye nezopolitiko. Yhini shame.
Amagama kaJacob Javits kunye noGavin McInnes ayengapelwanga kakuhle kwinguqulelo yangaphambili yesi sithuba.
Izimvo zomhlobiso wosuku lwe-valentine
indlela yokusebenzisa amasuntswana zokomba
oomama imini iintyatyambo imifanekiso
isitayela segumbi lokuhlala izimvo
Useto lweetafile zekrisimesi imibono yemifanekiso